Martisoor: Inj. Dhegoweyne oo falaanqeynaya faragelinta shisheeye ee Soomaaliya (dhegayso) – Radio Daljir
Martisoor: Inj. Dhegoweyne oo falaanqeynaya faragelinta shisheeye ee Soomaaliya (dhegayso)
Maarso 15, 2018 4:19 g 0
Kulanti wacan dhegaystayaal kuna soodhawada Barnaamijka Martisoor oo ah barnaamij todobaadle ah. Todobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah Md. Maxamuud Axmed Xasan (Inj. Dhagaweyne) oo ah aqoonyahan hadda deggan dalka Imaaraadka, falaanqeeyana arrimaha caalamka iyo kuwa Geeska Afrika.
Injineer Maxamuud Axmed Xasan (Dhegaweyne) oo si kooban taariikhdiisa qof ahaaneed uga sheekeynaya waxa uu nooga warramayaa taariikhda Soomaaliya iyo faragelinta dalalka shisheeye ay maanta ku hayaan dalka Soomaaliya.
Axmed sheekh Maxamed (Tallman) ayaa Daljir Bossasso ka soojeedinaya.
MARTISOOR 65 Wararka 21771
Madaxa Maamulka Galmudug oo dhagax dhigay Mashaaric hormarineed (Sawiro)
Wasiirka Gaashaandhigga DFS oo tababar u soo xiray Ciidamo (Sawiro)